Omunye ifoni yokuqala yeselula nge touch screen asebekhulile olunikezwa emakethe yasekhaya, kuyinto Texet TM - B450. Kuyinto idivayisi ngempela obusebenzayo lapho, ngaphezu ongakhetha eziyisisekelo, kukhona ezengeziwe. Iyunithi ngokwayo ngokugcwele ubuhle izidingo asebekhulile. Kwaba izinhlangothi yakhe emihle nemibi izobe kancane kancane tifundziswe kohlaka impahla.
Yini ehlanganisiwe nge smartphone yakho?
Into engajwayelekile hhayi Boxed Texet TM - B450. Uhlolojikelele uhlu oluphelele izesekeli kubonisa khona okunjalo kuzo njengoba:
A elula stereo ezingeni ehlangane ukhwaliti ongaphakeme umsindo.
Ibhethri ephethe namandla 1000 MA / h.
Yima for mobile phone ukushaja.
Ngisho esikhathini isethi kuhlanganisa imibhalo efana imanyuwali yomsebenzisi futhi lewaranti. Phakathi okusileleyo uhlu okukhulunywe ngaye ekuqaleni, kungenziwa ahlukaniswe flash card, ifilimu zokuzivikela front panel devaysa futhi, yebo, ikhava.
Ukuthuthukisa umsebenzisi futhi intengo igajethi
Thobekile Ubukhulu, like namuhla, kule kulandzelana nekuhlunga tinsita. Ubude bayo 111 mm, nobubanzi 56 mm, kanye ukushuba - 15 mm. Isisindo ingabe - 96 amagremu. Leli bhokisi senziwa ngokuphelele plastic nge kwe-matte. Yiqiniso, isixazululo eyakhayo enjalo ivumela igajethi isikhathi eside ukulondoloza ukubukeka yayo yasekuqaleni. Kodwa bonke plastic efanayo iyasebenza ngeke angaklwebha konakalisa. Ngakho-ke, ngaphandle ikhava zokuzivikela wabanikazi kule divayisi abanakukwazi ukwenza.
Kunesimo esifanayo futhi nge touch screen. Iinsetjenziswa ezingeni kokuqala, ngokufanele, aphambi komtshina yaso nayo eyenziwe ngepulasitiki. Ngenxa yalokho, ukubonisa nje ngeke akwenze ngaphandle ifilimu zokuzivikela. Isibuko kule divayisi kuyinto 2.8 amayintshi. Ngaphansi kwawo kukhona 4 izinkinobho ezinkulu. Ababili babo zenzelwe ukushaya ucingo bese uvala ucingo. Futhi nangu inkinobho esibhalwe ukuthi "M1" futhi "M2" ukunikeza isethi okusheshayo wezinombolo ezimbili. Ngenhla isibonisi kube yesifakwandlebeni ajwayelekile, okuyinto ivaliwe anezikhala metal zokuhlobisa. On the edge elungile zihlobene umakhalekhukhwini ukuvala ukhiye, ukulawula ikhamera nokulawula jika ivolumu. Kodwa ohlangothini lwesobunxele kuyinto isokhethi "MikroYuSB" format. On top flashlight kanye Jack 3.5 mm for izipikha zangaphandle. Ngokuvamile, eziklanywe kahle 'babushkofon ". Amanani for ke uhla ka-40 kuya ku-55 zamaRandi. It kuvela bhalansi of intengo nokusebenza.
Hardware ezisekelwe nememori subsystem
Umenzi akubonisi chip lapho yakhiwe Texet TM - B450. Lokhu kungenziwa kuphela ukuyichaza. Kodwa Computing yayo umthamo kumanele ukulalela MP3 - zezingoma nerediyo, buka izithombe kanye nezithombe. Inani imemori yangaphakathi nayo kungacacisiwe, kodwa singasho ngokuqiniseka ukuthi kukhona ubuncane, okuyinto ikuvumela ukuba asebenze kahle nale divayisi. Kodwa ukuze usebenzise lo mshini ukuze esiphezulu, ke kuyodingeka ngaphezu kwalokho ukuhlomisa idrayivu bangaphandle. Kodwa njengoba sekushiwo ngaphambili, akusiyo kule nguqulo Boxed we igajethi, kubalulekile ukuba ukuthenga ngemali eyengeziwe. Ngokungafani namadivayisi amaningi afanayo zingalungiswa ngu Emafleshikhadi lokwenelisa 32 GB, 16 GB lingasethwa kuleli cala. Yini eyenza ukuba lo enjalo Onjiniyela isixazululo - kunzima ukusho. Kodwa ngisho ivolumu enjalo yanele ukuba embule amandla aphelele yale foni esithintwayo.
I ihluzo futhi kwikhamera enkulu
Ukuze input bese okukhipha ulwazi kulesi apharathasi uhambelana isibonisi 2.8 amayintshi kabani idayagonali, futhi isinqumo salo 240 x 320. Futhi, kusekelwe TFT-matrix ubudala nekwehlwaya engele ngenxa yalokhu ziye zanciphisa kakhulu Texet TM isikrini - B450. Uhlolojikelele nemingcele lobuchwepheshe ihluzo ukusebenza kule divayisi akusho umxhwele. Kodwa ngakolunye uhlangothi, le divayisi kuyinto ekilasini umnotho, okuyinto kuthambekele izidingo asebekhulile. Futhi nemingcele ezinikezwe ngenhla kumele kwanele umsebenzi ukhululekile. Futhi, onjiniyela abakakhohlwa idivayisi yeselula ifakwe ngekhamera. Uneziqu ukusebenza nesizotha kakhulu. Kusekelwe inzwa 1.2 MN. Ngakho-ke, ikhwalithi isithombe kuyoba kude kakhulu.
Omakhalekhukhwini asebekhulile kwalesi imodeli ifakwe ibhethri ephethe namandla 1000 MA / h. Ezingeni isilinganiso ukucindezeleka ocingweni cell elilodwa ngaphandle kwenkokhiso yakhe kufanele izinsuku 2-3. Uma ukusetshenziswa esiphezulu kule divayisi, lokhu ipharamitha kuzoncishiswa 8 amahora. Kodwa nge umthwalo sakugcina efonini ephathekayo, lesi silinganiso kuzokhulisa lungene 4 nobusuku obungamashumi amane. Izinga yokuzimela kule divayisi ikude the best phakathi kwezinye "babushkofonov". Inkinga eyinhloko ke ukuthi iskrini, futhi amandla webhethri lincane kakhulu salokhu ikilasi amadivayisi. ibhethri okunjalo kahle kungase kutholakale efonini ephathekayo "Nokia 1100" futhi "Nokia 1280", kodwa "B450" lesi silinganiso kusobala akwanele.
Njengoba umgomo nohlaka abameli proprierativnaya yesistimu yokusebenza e Texet TM - B450. Izibuyekezo abanikazi umakhalekhukhwini abonisa ukuthi liye kakhulu kabusha futhi elungiselelwe izidingo asebekhulile: usayizi zonke izinkinobho itheksthi lekhulisiwe ukuboniswa amagama amakhulu. Ezinye izindaba zika-imenyu kule kwihendisethi kuyinto ngempela ejwayelekile. Kwamanye amanethiwekhi omphakathi, kulesi simo, akukho nokuncane ukungabaza. Cishe akunakwenzeka ukuthi uzodinga umuntu omdala. Kodwa wokubala evamile, ikhalenda, kanye nezinye izinto eziyisisekelo ihlanganiswe kuwo, yebo.
Ungakhohlwa Onjiniyela ukunweba amakhono kule divayisi ngosizo kwezicelo multimedia. Lokhu phone- "babushkofon" Ungadlala ezihlukahlukene ngokurekhoda komsindo, ulalele umsakazo, bese ubuka izithombe. Zonke isofthiwe ezidingekayo ekuqaleni ifakiwe kudivayisi, futhi asikho isidingo ukuthini ukukufuna okwengeziwe futhi ufake. Kodwa, futhi, ukuthi lezi abezindaba isicelo evamile futhi kancane kancane ezahlanganyela kulo iyunithi, kumele ifakwe i drive zangaphandle.
Konke odinga ukuthi abelane ngolwazi njalo nezwe elingaphandle babe Texet TM - B450. abanikazi Izibuyekezo umakhalekhukhwini ukwaba ezifana izindlela yokudlulisela idatha :
GPRS ivumela ukubukwa izinsiza linesizotha inthanethi. Yiqiniso, kungenzeka ngezinhloso ezimbi nakakhulu ukusebenzisa le ndlela ka ukuthumela idatha, kodwa ijubane kuba nesizotha kakhulu, futhi ukulanda isamba umxhwele ulwazi uzodinga isikhathi esiningi.
Enye indlela engenantambo ukwabelana ngolwazi - a "bluetooth". It ikuvumela ukuxhuma igajethi zangaphandle stereo engenantambo earphone we noma ukudlulisa idatha kumadivayisi eselula efanayo.
"MikroYuSB" futhi "3.5 mm port yomsindo" - iqoqo yezintambo izindlela ukudluliswa kwedatha. Eyokuqala wabo ikuvumela ukuxhuma ku-PC yakho noma ukushaja ibhethri. Owesibili - wayo ngoba xhuma yezintambo stereo earphone we.
Ochwepheshe nabanikazi yale foni ephathekayo
Kukhona sici esisodwa esibalulekile Texet TM - B450. kuba khona inkinobho ozinikele ngemuva kudivayisi yilokho okubizwa ngokuthi "SOS". It ikuvumela ukuba pre-ezenziwe uhlu ababhalisile ukuthumela umlayezo wombhalo ucela usizo. isixazululo esisebenzayo kahle lolu Onjiniyela kudivayisi. Kungazelelwe lo muntu ezizwa engaphathekile, bese ungakwazi ngokushesha ukubuza izihlobo usizo. Kulesi simo, ngomzuzwana bokudlala indima, futhi isixazululo eyakhayo ulungisiswa.
Interface, software kanye hardware ukugxusha devaysa kuphakamisa akukho ukuphikisa. Konke okudingayo le foni. Kukhona izinketho ezengeziwe futhi, khona elibangela ezinye izingqinamba, ezifana ikhamera, kodwa akunjalo ezibucayi kakhulu. Kodwa yini ebangela ukuba ngempela libalahla - a umthamo webhethri kanye degree of ukuzimela negajethi. Kodwa kwakunokwenzeka ukusungula ibhethri kangcono futhi ukuqinisekisa idivayisi operation eside okukodwa ke! Lapho ukuthi izindleko ushintsho olunjalo akunandaba kakhulu, kodwa umphumela kwakuyoba ziye zaphumela ezikhexisayo.
Ngokusho eziningi, futhi "okuqhubekayo" okwamanje kuba Texet TM - B450. Iningi izinhlelo zale divayisi cishe kusetshenziswe ngumnikazi ezingaba khona. Lokhu kusebenza umsakazo, umculo, izithombe, kanye ukubukwa isiqophi Ukugunda. Ucingo asebekhulile Kufanele kube kulula ngangokunokwenzeka futhi ingasetshenziswa ngokuyinhloko ngokwenze amakholi noma ukuthola i-SMS. Yonke enye into - lena kakhulu. Yiqiniso, kungaba flashlight kwezinye izimo adingekayo, futhi zonke. Umphumela uba ukuthi ifoni izici eziningi ewusizo, okuyinto in umkhuba ngeke isetshenziswe. Noma kunjalo, amakhasimende abo tando surely thola le gajethi. Laba ngabantu abadala, abakhetha entsha, ubuchwepheshe okuthuthukile. It is egxile nabo efonini ephathekayo.
Nokia 107: kakhulu umsebenzi "ihhashi"
Linseed uwoyela esiswini esingenalutho - Ukudla hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa okhalweni
Ababhula - bangobani? Incazelo
Isisekelo 939: Incazelo